Nabaddoon ka mid ahaa ergadii doorashada deegaannada Koonfur Galbeed oo lagu Dilay | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Nabaddoon ka mid ahaa ergadii doorashada deegaannada Koonfur Galbeed oo lagu Dilay
Nabaddoon ka mid ahaa ergadii doorashada deegaannada Koonfur Galbeed oo lagu Dilay
Afgooye (Halqaran.com) – Kooxo bistoolada ku hubaysan ayaa toogtay Nabadoon Ibraahin Maxamed Ibraahin oo ka mid ahaay Ergadii Doorashada deegaanada Maamulka Konfur Galbeed.
Nabadoonka ayaa dhawr xabo oo rasaaas ah waxaa lagala dhuftay madaxa, waxaana sidaasi meesha kaga baxsaday Kooxdii falka dilka ah gaysatay.
Nabadoonka oo fiidkii caawa lagu dilay Degmada Afgooye ee Gobolka Shabellaha hoose, ayaa wuxuu ka mid ahaay Ergadii Xildhibaanada ku soo dooratay Magaalada Baydhabo ee deeganada Koonfur Galbeed.
Ciidamada Booliska Afgooye ayaa gaaray goobta dilka uu ka dhacay, waxaana halkaasi laga qaaday maydka marxuumka la dilay oo eheladiisa ay qaateen.
Maleeshiyaadka Ururka Al-Shabaab ayaa wali wada ugaarsiga ay ku hayaan Odayaasha Dhaqanka ee Nabadoonada ah, kuwa iska diiwaangeliyay mooyee kuwa kale wali waxa ay ku beegsanayaan gobollada dalka Soomaaliya.
ergadii doorashada deegaannada koonfur galbeed
nabadoon lagu dilay Afgooye